Lionel Messi Oo Digniin U Diray Real Madrid: "Hammigayagu Waa In Aanu..." - Laacib
HomeWararka Champions LeagueLionel Messi Oo Digniin U Diray Real Madrid: “Hammigayagu Waa In Aanu…”
Lionel Messi Oo Digniin U Diray Real Madrid: “Hammigayagu Waa In Aanu…”
Paris Saint-Germain ayaa wareegga 16ka Champions League la ciyaari doonta Real Madrid, waxaanu laacibka reer Argentina ee Lionel Messii heli doonaa fursad uu mar kale kaga hor tago Los Blancos oo xilli ciyaareedkii horena isaga oo Barcelona ah uu ku waajahay Santiago Bernabeu.
PSG ayaa isku-aadkii hore ku dhacday Manchester United, taas oo taageereyaasha siisay filasho ah inay heli doonaan isku-dhaca Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, hase yeeshee qalad ka dhacay qaabkii loo sameeyey qori-tuurka ayaa sababay in mar kale lagu celiyo, waxaanay PSG ku beegantay Real Madrid.
Laacibka reer Argentina ee sida xorta ah ugu wareegay PSG xagaagii tegay, ayaa waxa uu ka hadlay hammiga kooxdiisa, isaga oo farriin u diray Real Madrid oo ay wada ciyaari doonaan wareegga 16ka, waxaanu yidhi: “Hadafka PSG waa in ay ku guuleysato Champions League, waana hiigsiga qof walba.
“Kooxu aad iyo aad ayay hore ugu soo dhowaatay. Waa tartan muhiim u ah kooxaha oo dhan, waananu isku dayi doonaa in aanu ku guuleysano.”
Xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi waxa kale oo uu ka hadlay u wareegitaankiisii horyaalka Ligue 1 kaddib 21 sannadood oo uu u ciyaarayay Barcelona, waxaanu yidhi: “Isbbeddel weyn ayuu ahaa kaddib waqti badan oo aan hal meel ka ciyaaarayay, markaa wax fudud ma ahayn. Laakiin wax fiican ayaanu ka samaynaynaa magaalo cajiib ah iyo mid ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan adduunyada.”
Messi inuusan Real reebi karin waa laog yahy muxuu kacalaacayaa Real madrid wa naadi champions